အံ့ဖွယ် Krabi | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
Category Archives: အံ့ဖွယ် Krabi
အဆိုပါ Rendez-vous Leopard ငါးမန်းများနှင့်ပင်လယ်အောက်မှာအံ့သြဖွယ်သန္တာများအတွက်
Musang Reef သို့မဟုတ်ပိုကောင်းငါးမန်းပွိုင့်သို့မဟုတ် Anemone Reef အဖြစ်လူသိများဘုရင် Cruiser ကိုဖျက်ဆီးလုပ် theAndamanSea ရဲ့အကောင်းဆုံးငုပ် site ကိုဖြစ်သည့်အခြားရေအောက်အင်ပါယာတက်, ဖူးခက် andPhiPhiIsland အကြားတည်ရှိသည်, ရောင်စုံပင်လယ် anemone ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရေအောက်သန္တာအာရှရပင်များနှင့်ခုံ၏ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ, အဖြစ်ကောင်းစွာဘုရင် Cruiser ကိုဖျက်ဆီးရာမှအဏ္ဏဝါဘဝတွေအတွက်အိမ်ရာသစ်. ပို. အရေးကြီးသည်, Musang ရော့ခ်ဟာ rendez-vous Leopard ငါးမန်းအဘို့ဖြစ်၏.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : ဧပြီမှဒီဇင်ဘာလ, အကောင်းဆုံးကိုကာလအဖြစ်မတ်လမှဖေဖော်ဝါရီလနှင့်အတူ
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 10.00 သို့ 13.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : ဖိဖိဒုန်ထဲကနေ, အကွာအဝေးများအတွက်လှေ atTonSaiBay ပေါ် 20 ကီလိုမီတာ, ရေရှည်တည်တံ့ 45 မိနစ်များ, သို့မဟုတ် Krabi ထံမှ, Ao နန်း, အကွာအဝေး 35 ကီလိုမီတာ. ရေရှည်တည်တံ့ 1 နာရီ 45 မိနစ်များ
This entry was posted in အံ့ဖွယ် Krabi and tagged Krabi ခရီးသွား on အောက်တိုဘာလ 23, 2011 အားဖြင့် admin.
အဆိုပါချိန်ညှိခြင်း Sun ကများ၏တည်မြဲမှတ်ဉာဏ်နှင့်အထင်ကြီးမီးပြတိုက်
Ko Lanta ယိုင်၏ဝေးဆုံးကို, ကျွန်း၏အနောက်ဖို့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရှိတည်နေရာ ofLantaIslandsNational ပန်းခြံဖြစ်ပါသည်. ဤအချက်မှာ, ပင်လယ် jutting အမှတ်အကြားအမွှာ bays တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့လှလှပပလှုနေကြတယ်, နေရောင်ကိုပင်လယ်၌ setting ကြောင့်ညဦးယံ၌တောက်ထားတဲ့အဟောင်းမီးပြတိုက်အားဖြင့်ထိပ်ဆုံး, သင့်ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ဦးတည်တံ့မှတ်ဉာဏ်ကို, ခရီးသွားဂျာနယ်အတွက်အခြားစာမျက်နှာအဖြစ်.
အမြင်မှအကောင်းဆုံးအချိန် : ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှနိုဝင်ဘာလ
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 18.00 သို့ 19.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့: FromKrabiTown, အဝေးပြေး No.4206 အပေါ် Ko Lanta ဆိပ်ခံတံတားဖို့လမ်းဆုံမှ Khlong Thom ခရိုင်အတိတ်အသုံးပြုမှုအဝေးပြေး No.4 တက်နှင့် Lanta ယိုင်ဖို့ကူးတို့ယူ Laem Tanod ၏အစွန်အဖျားမှာအဆုံးအထိအနောက်နိုင်ငံတွေအပေါ်ကမ်းခြေလမ်းနှင့်အတူ lsland.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှနိုဝင်ဘာလ
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 10.00 သို့ 15.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : From Lanta laland ,a passenger boat to Ngai lsland is available, costing 450-500 baht each or an speed boat at 650 baht each, Provided only during the high season from November to May. And fromPakMengBeach, Sikao District, boat can be hired to Ko Ngai at 1,200-1,500 baht per trip.
Muang ဟိန်, ဟိန်ကို Daeng
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : ဧပြီမှဒီဇင်ဘာလ, with February to march as the prime period
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : The most convenient point is Sala Dan Boat Landing, Lanta Yai lsland,adistance of about 75 kilometers, foraboat trip of about 3-4 hours.
Ko Lanta ကမ်းခြေ၏အလှအပ
Ko Lanta Yai သည်ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိလှပသောကမ်းခြေအများအပြားကိုကရီးဝီးယားရှိ anislandof ဟုခေါ်တွင်သည်, အားလုံးသည်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်. ဤကမ်းခြေအားလုံးသည်အနားယူရန်နှင့်ရေကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်အလှဆုံးကမ်းခြေကတော့ Ba Kan Tiang Beach ပါ, ကျော်လွန် 1 Ko Lanta ကမ်းခြေအလှတရား၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ကီလိုမီတာရှည်.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : နိုဝင်ဘာလမှမေလနှောင်းပိုင်း
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : မနက်ခင်း 8.00 သို့ 12.00 အကြောင်းကိုနေဝင်ချိန်မှာ hrs.and 18.30 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : Krabi မှ, အဝေးပြေးအမှတ်ကိုသုံးပါ.4Khlong Thom ခရိုင်ကိုဖြတ်ပြီးဆိပ်ခံတံတားဆီသို့ကူးသွားသည်, Lanta lsland သို့, အဝေးပြေးအမှတ်ကိုသုံးပါ. 4206, Lanta Noi မှ Lanta yai lsland သို့ကူးတို့ဖြင့်နှစ်ကြိမ်ကူးပါ, တစ်ခုလုံးကိုကျွန်းတစ်လျှောက်လုံးအနောက်အပေါ် beachfront လမ်းနှင့်အတူ.